Ilayisi enetswele kunye nepelepele | Ukupheka kweKhitshi
UMaria vazquez | | IPasta, Iiresiphi ezilula
Emva kweKrisimesi enkulu ngokutya kunye nemibhiyozo, lixesha lokuba ubuyele kwinkqubo yesiqhelo. Kwezi zokupheka zemihla ngemihla esizonwabelayo ngokulula kwazo kwaye kusithatha umgudu omncinci ukuzilungiselela. Ngokukhawuleza kwaye ngexabiso eliphantsi, yintoni enye onokuyicela?
Irayisi enetswele kunye nepepile yenye yezo zokupheka. Isitya esimnandi kakhulu esenziwe ngezinto ezilula eziqhelekileyo kwi-pantry yethu. Ukunqunqa imifuno kwaye uyithumele kubushushu obuphantsi ngaphambi kokongeza irayisi kuphela kwemfihlo yale rayisi ilungile kwimizuzu engama-30.
Le rayisi enetswele kunye nepepile ibuyisela kuthi kwizinto ezilula emva kweKrisimesi.
Iikomityi ezimbini zerayisi
4½ iiglasi zamanzi
1 icephe yesosi yetumato
Gweba itswele nepepile uzifake kwimbiza ephantsi ngeoyile yomnquma kunye netyiwa.
Xa zithambile kwaye zenziwe ngegolide kancinane, sidibanisa isosi yetumato kwaye sinika amathuba ambalwa ukuyifaka.
Emva koko, sidibanisa irayisi. Yigubungele ubushushu obuphakathi kangangemizuzu embalwa kwaye uyigubungele ngamanzi.
Sivumela irayisi ipheke kwaye ukuba kukho imfuneko songeza amanzi ngexesha lenkqubo.
Nje ukuba irayisi ithambile, yususe emlilweni, yigubungele ngelaphu kwaye iphumle okwexeshana.
Ukuba okwangoku ubona ukuba unayo irayisi eseleyo, yisebenzise kwaye uyisebenzise ukwenza okumnandi Iikeyiki zerayisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » IPasta » Irayisi nepepile kunye netswele
Nceda utshintshe "iibhaskithi ezincinane"…. kubuhlungu amehlo.
Molo, iresiphi ilungile kodwa nceda iiglasi zibhalwe kunye no-V
Yhu ndiyiphosile, enkosi! Ngamanye amaxesha ukusondela kwe-v kunye ne-b kwikhibhodi akuncedi 😉
Iikhekhe ezincinci zetshokholethi kunye nama walnuts